SIDA LOO DHEJIYO XAYAWAANKA CAAGGA AH EE CAAGGA AH. TIKNOOLAJIYADA IYO TALAABO TALAABO TALAABO AH OO LAGU HAGAAJINAYO XAYAWAANKA DARIISHADDA. KA BACDI DHAR CAAG AH - SAMEE NAFTAADA
Sida loo doorto daaqadaha
Waxaa jira sababo kala duwan sababta ay u jirto rabitaan ama aad u baahan tahay inaad ku rakibto daaqadda daaqadaha leh gacmahaaga:
Daaqadu waa xaalad fiican, lakulanka daaqaduna waa waxyeello u geystaa (xoqan, xoqan, dhalaalay, gubay, iwm).
Xayawaankii hore ee daaradda ayaa loo rakibay si qaldan.
Waxaa jiray rabitaan ah in lagu rakibo xayawaanka daaqada midab kala duwan. Tusaale ahaan, ka dib qolka dayactirka, midabka saxanka PVC-ku wuxuu ku haboon yahay gudaha gudaha.
Waxaa jira baahi loo qabo in la badalo xayawaanka daaqada oo leh ballaar ballaaran ama mid yar. Xirmiyaha ballaaran ee la dhigo marka ay muhiim tahay in la dhigo tiro badan oo ah shay, sida dhirta ubaxyada ama geedo. Xayawaan daaqo oo culus ayaa laga yaabaa in ay noqoto mid lagama maarmaan haddii ay aad u ballaadhan tahay ka hortagga dhaqdhaqaaqa bilicsan ee hawada kuleylka iyo kor u qaadista hawada ee qolka xilliga qaboobaha. Isla mar ahaantaana, hawada kulul ee batteriga ma kululeyso daaqada, "dhidid", qoyaan iyo xitaa fungus ayaa u muuqda.
Way adagtahay in la helo macallin kaas oo qaadan doona qadar yar oo shaqo sida rakibida hal xayndaab daaqad.
Ma ahan mid aad u adag in lagu dhejiyo daaqada daaqada, isla mar ahaantaana waxaad badbaadin kartaa lacagaha lagu kharash gareeyo jiilka.
Waxa kaliya oo wanaagsan in la sameeyo wax waxtar leh iyaga gacmahooda.
Waa muhiim! Daaqad ballaadhan oo dhererkeedu wuxuu kor u qaadaa qolka iyo aagga la isticmaalo.
Marka, haddii aad ubaahan tahay inaad bedesho saxanka PVC, waxaad u baahan tahay inaad ogaato in daaqaduhu ay ka duwan yihiin:
midabada, marka laga reebo iftiin iyo iftiin mugdi ah, waxaa jira waxyaabo dhagax ah iyo qoryo qaali ah;
xajmiga: width from 110 to 800 mm, dhererka 4050 ilaa 6000 mm, oo dhumucdiisu tahay 18 illaa 22 mm;
shirkadda iyo waddanka uu ka yimid;
qiimaha (min 3 illaa 20 doolar halkii mitir);
tayada maaddada - chloride polyvinyl, oo ay ku jirto iska caabin si loo xiiro iyo xoqdo, iska caabin kulaylka, qoyaanka iyo adkaynta uumiga, iska caabinta shucaaca ultraviolet, saaxiibtinimada deegaanka, adkeysiga.
Ma taqaanaa? Chloride Polyvinyl waxay leedahay codsi aad u ballaaran. PVCs ayaa xitaa sameeya cinjirro loogu talagalay dadka xasaasiyad ku leh sunta.
Marka laga soo tago daaqada lafteeda, waa lagama maarmaan in la iibsado labo dabool oo lagu rakibay qaybaha qaybta ah ee xayiraadda marxaladda ugu dambaysa ee shaqada rakibidda. Haddii ay jirto baahi loo qabo xiriir toos ah ama xagal leh ee laba daaqadaha, waa inaad iibsataa xiraha guud ee geeska ee taarikada PVC.
Qalabyada lagama maarmaanka ah iyo qalabka loo isticmaalo
Si aad u rakibto tikidh caag ah oo leh gacmahaaga, waxaad u baahan doontaa qalabka soo socda iyo alaabada:
Daaqada birta ah.
Calaamadee ama qalin.
Bulgaar, jigsaw ama jajab.
Puncher (ikhtiyaari ah, oo keliya haddii qalabka meelaha yaryar ay cufan yihiin).
Qalabka iyo sawirida.
Xumbada dhismaha iyo qoryaha.
Nooc ka mid ah substrate caag ah ama baararka qoryaha.
Sibidhka, miisaanka alaabta ama xabagta si aad u dhigto baararka sare ee loo baahan yahay ama kor u qaadidda heerka salka.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato sida rinjiga hore iyo cadadkaba, si cad u dhigo saqafka iyo quraaradda dhagaxa, albaabka, sida loo sameeyo qaybta dusha sare ee albaabka ama sida loo xiro derbiyada leh alaabada la gashado.
Iyadoo aan loo eegin in xayawaanka daaqada lagu rakibo koox rakibo gaar ah ama qof cusub oo arrintan ku saabsan, nidaamka oo dhan lagu rakibo caagada PVC ayaa loo qaybin karaa dhowr marxaladood.
Waa inaad diyaarsataa meesha aad qorsheyneyso inaad ku rakibtid saxanka PVC, oo ah qaybta hoose ee furitaanka albaabka iyo daaqadaha dhinaca daaqadaha. Xayawaanka daaqadda waa inuu galaa darbiga dhinacyada, sidaas awgeed, dhererkoodu waa lagama maarmaan in la gooyo xidhiidhiyeyaasha qoto dheer oo ah 1-2 cm dhinaca dhinac kasta si ay u soo qaadaan saxanka caaga ah. Tani, xaashida daaqadda daaqadda waxaa lagu dabaqayaa derbiga waxayna calaamad u tahay in la jarjaro qalin ama calaamad. Marka xigta, si taxadar leh u xulo geesaha si ay xayawaanka u bilaashaan inay galaan. Shaqadani waxay u baahan tahay taxadar la'aan si aan dib ugu soo celin marxalado isku dhafan oo aan dhicin si ay u xiraan godadka ballaaran ee dhinacyada.
Waa muhiim! Si loo yareeyo habka dib u soo celinta xayawaanka, waxaa habboon in la daaweeyo iyaga si taxadar leh intii suurtogalka ah ee geedi socodka lagu dhejiyo.
Haddii geeso ka mid ah ceelasha ayaa lagu qallajiyey geeso biro ah, waa inaad si taxaddar leh u gooyaa geeska birta leh Booqday. Booqdaha waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la sameeyo boogo gogol xaar ah. Qeybaha kale ee derbiga ee derbiga ah ayaa ku haboon in lagu sameeyo qalab iyo naas. Qalabkani wuxuu ku haboon yahay haddii walxaha jamacku ​​uu yahay malab gypsum. Haddii dhufsigu ka samaysan yahay wax la taaban karo, ka dibna meeraha ku yaal xayndaabku waa in la sameeyaa iyadoo la isticmaalayo qalab. Qeybaha garabka ee xayndaabyada waxay u adeegaan sidii taageero dheeri ah oo loogu talogalay xayawaanka daaqada dhinacyada.
Qaybta hoose ee furitaanka albaabka iyo taageerada taageerada, oo ah hoosteeda daaqada oo loo isticmaalo in lagu rakibo xayawaanka daaqada, waa in la nadiifiyaa naqaska, naqshadaynta iyo lebenka, taas oo u muuqata geeddi-socodka abuurista xargaha meelaha yaryar. Ka dib markaa, isticmaal burush si aad uga saarto qashinka iyo boodhka. Meelaha la nadiifiyey waa in la qoyaan. Tani waxay lagama maarmaan u tahay adhesion fiican ee xumbada xajinta leh dusha sare ee xayiraadda daaqadda. Waxaa lagugula talin karaa oo kaliya inaadan qoyin biyaha dushooda, laakiin inaad isticmaasho asaas ahaan ujeedadaas. Carrabku wuxuu xoojiyaa dusha sare, ka qaadaa boodhka isla markaana qoyaan isla markaa. Cadayada si caddaalad ah ayaa loo daboolaa dusha sare ee ciidda, gogol dhigo dhammaan godadka, dhuumaha, daloolada, dildilaaca.
Waa muhiim! Si aanad uga dhicin xayiraadda daaqada, waa inaad eegtaa tayada xakamaynta daaqada iyo haddii loo baahdo, cillada dhammaan wixii ka soo kordhay marxaladda diyaarinta.
IyoMea daaqadda diyaarka u ah, waa lagama maarmaan in laga gooyo meel ka baxsan xayawaanka daaqadda. Si tan loo sameeyo, xisaabi dhererka iyo ballaca daaqada mustaqbalka. Dhererka xayawaanka daaqadda waa inuu ka weyn yahay dhererka dusha sare ee kolba, oo ka sii gudubta meelaha yaryar. Dhererka kicitaanku waxay ku xiran tahay doorashooyinka dhadhanka shakhsi ahaaneed, sida caadiga ah 5-7 cm dhinac kasta, laakiin waxaad ku xaddidan kartaa qiyaasta 1-2 cm.
Baaxadda qaybta shaqada waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo la soo uruurinayo:
ballaadhka dusha sare ee subwindow;
qoto-dheerta kaas oo tuubada daaqada hoosteeda loo geliyo qaabka loo yaqaan "pedestal profile" (badanaaba 20 mm);
ka soo bixida qayb ka mid ah xayawaanka daaqadda, taas oo aan ka badnayn 100 mm, si aanay u hor istaagin kuleylka kuleylka.
Dhinacyada cirifka xayawaanka daaqada ah waa inay jaraan leydiyada oo ka hortagaya dharka inuu ka hoos maro jiirada. Dharka caaga ah ayaa si fudud loo gooyaa. Waxaad dooran kartaa qalab kasta oo lagaa jarayo: Bambo, khariidado, jigsaw. Dhamaan jajabyada, cillad-darrada iyo cillado yaryar oo yar yar ayaa la dabooli doonaa taarikada dhammaadka caag ah.
Tixgeli faahfaahin dheeraad ah sida loo xiro nalka iftiinka, qalabka korontada ee gacmahaaga iyo rakibid kululeeyaha biyaha kululeeyaha, qaboojiyaha, qaboojiyaha qubayska, indhoolayaasha, kursi fadhiya, dabka kuleylka.
Ka dib markii faaruqintu diyaar u tahay, waxaad u baahan tahay inaad isku daydid meesha, taas oo ah, ku rid qaybta hoose ee daaqadda furan oo ku hagaaji jimicsiga dabaqyada iyo profile. Haddii inta lagu jiro fayeysiga qaladaadka qaar la muujiyey, waa in la tirtiraa ka hor inta aan la rakibin kuraasta daaqadda.
Rakibayaasha qaarkood waxay ku xiraan daaqadda si adag oo daaqada ah, si loo xakameeyo isticmaalka biraha biraha ah. Si kastaba ha ahaatee, khubarada intooda badani waxay aaminsan yihiin in daaqada si wanaagsan loo xirxiray ay tahay in ay leedahay heer yar oo jilicsan ee gudaha qolka, sidaas darteed haddii ay dhacdo qoyaan, waxay hoos u dhacdaa.
Si loo xakameeyo ikhtiyaarka rakibaadda ee loogu talagalay faaruqinta xayawaanka daaqada, waxaa lagama maarmaan ah in la saaro qalabka wax lagu duubo ama alwaaxyada diyaaradeed oo ay wehliyaan diyaaradeeda. Qaddarkooda waa in la soo xushaa si ay dusha sare ee saxanka PVC-ga u fiican tahay. Si aad u rakibto hal xayiraad waxaad u baahan tahay ugu yaraan 3 taageero (hal dhexda dhexe iyo laba meel u dhow cidhifyada). Masaafada u dhaxaysa taageerooyinka waa in aysan ka badnaan nus mitir. Si gaaska iyo alwaaxyada aan loo guurin, waxaa lagu talinayaa in lagu dhajiyo shubka silikoon, makiinadda alaabta ama alaabada sibidhka.
Waa muhiim! Nidaamka samaynta iyo rakibida daaqadaha PVC waa in si joogto ah loola socdo heerka dhismaha.
Taageerada xayawaanka daaqadda waa in la dhigaa heerkaas oo kale marka marka la xiro daaqadda furan ee furan aysan jirin farqi u dhexeeya daaqadda iyo qaabka daaqada. Haddii la buuxiyo shuruudahan, taageerooyinka ayaa ka sarreeya 40 mm, taasi waa mid aan la aqbali karin. Maqaarka xumbada oo ka badan 40 mm ma noqon doono tayo sare, waxaa jiri doona hulalka, ma awoodi doono in uu adkeeyo culeyska lagama maarmaanka ah, dhismooyinka insulating waxay noqon doonaan kuwo aan ku filneyn. Xaaladdan oo kale, ka hor inta aan la gelin dharka hoostiisa hoostiisa, waxaad u baahan tahay inaad sare u qaaddo heerka hoose ee furitaanka daaqadda. Tan waxaa lagu sameyn karaa cement ama malab gypsum, dabaqa hoose, iwm.
Marka la diyaariyo marxaladda diyaarinta ee xayiraadda daaqada, waxaan nadiifinay qaybta hoose ee furitaanka daaqadda, xoojiyay oo ku qoyay asal ahaan. Xilliga rakibida xayawaanka daaqada, asaasiga ayaa horey u qalalan, iyo adeygga iyo dardargelinta dabbaasha ee xumbada, dusha sare ee xayiraadda xajinta ku iman doonto waa inay qoyaan. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la qoyo qaybta hoose ee furitaanka albaabka iyo qaybta hoose ee xayiraadda daaqadda. Saxanka PVC ee la daboolay filim difaac ah. Cidhifyada xayawaanka daaqadda, kaas oo lagu rakibayo wejiga daaqada iyo godadka dabaqyada waa in laga nadiifiyaa filimka difaaca.
Qaybaha haray ee xayiraadda daaqada, waxaa lagugula talinayaa inaad sii haysatid filimka ilaa dhammaan wixii dayactir ah la dhammeeyo. Si aan ugu dhicin meel ka hooseysa xayawaanka daaqada, waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa in yar yar zapenit booska u dhexeeya hoose ee furitaanka daaqada iyo profile taageere window. Ka dibna xumbada waxaa lagu daboolaa xariijin ballaaran oo ka hooseysa geeska farqiga ah ee xayawaanka daaqada, ka dibna xayawaanka cufan ah ee diyaaradda oo dhan ee saldhiga. Si loogu sahlanaado codsiga xajinta, waxaa loo isticmaalaa dheecaanka dheeraadka ah ee dheeraadka ah.
Waa muhiim! Heerka xayawaanka waa inuusan ka weyneyn heerka taageerada ee hoosta xayawaanka. Marka xumbo badan, waxa ugu muhiimsani maaha in la dhaafo.
Marka la qaboojiyey, xumbada ayaa kor u qaadaysa mugga si aad u awood u leh inay kor u qaadaan daaqadda. Si looga hortago ciladahan oo kale, waxaad u baahan tahay inaad culeyska saarato saxanka PVC-ka. Waa lagama maarmaan in la dhigo wax si siman hoosta culeyska si uu miisaanka u faafo si siman. Caddadka waa in lagu dhejiyaa dhinaca gudaha ee xayawaanka daaqadda, tan iyo geeska dibadda ayaa si sax ah loogu cadaadin doonaa daaqada daaqadda.
Mar kale ayaan dib u hubinno haddii aysan jirin wax boos ah, haddii laysku daro daaqada si siman, haddii kor u kaca ay isku mid yihiin cidhifyada, waxaa la arkay xargo loo baahan yahay. Marka ay dhacdo in lagu ogaado qalad xumo yar gudahood laba saacadood ee ugu horreeya ka dib marka la rakibo, waa ku filan oo kaliya si loo hagaajiyo. Waxaa laga yaabaa inaad ubaahan tahay inaad sameyso dhar jilicsan oo leh jilbaha jihada saxda ah, iyo dhismaha godadka ama hilloyinka waxaa lagu dhejin karaa iyada oo loo marayo culeyska dusha sare ee xayndaabka daaqadda.
Waxay faa'iido u yeelan doontaa mulkiilayaasha guryaha ee guryaha, xeryaha xagaaga, iyo sidoo kale deganayaasha waaxda gaarka loo leeyahay ee magaalooyinka sida loo sameeyo jidka ka jaridda qoryaha, jidadka la taaban karo, dhisida qaabka aasaaska deyrka, ka samee xayndaab ka yaryar, xayndaab ka sameysan silsilad isku xiran, iyo sidoo kale sidii loo dhisi lahaa verandah iyo hool , barkad, musqusha iyo maqaasiinka adiga ayaa sameeya
Nusqaamo iyo dildilaacyo ayaa ka muuqda isgoysyada daaqadda iyo gabbaadka, daaqadda daaqadda iyo daaqada, iyo sidoo kale daaqada iyo kicinta. Sida iska cad, waxaa lagugula talinayaa inaad saxdo qaladaadahan ka dib marka la dhejiyo dhammaan waxyaabaha ugu muhiimsan (daaqada, xargaha iyo jiirada).
Baaxada ayaa la xiray iyada oo la isticmaalayo shukumaan silikoon ah, taas oo lagu daboolo faashad khafiif ah oo ku xiran xubnaha. Cidhifyada dusha sare ee shaabbadeeyuhu waa inaysan helin, waa in la isku qurxiyo oo la mariyo cajalado daboolan ka hor. Waxaa intaa dheer, shukumaan badan iyo cajalado maaskaro ah waa in isla markiiba laga saaraa ka dib marka la isticmaalo shubka. Ka dib marka ay qoyaan, way adkaan doontaa in la sameeyo, natiijadu waxay noqon doontaa mid aan sax ahayn. Xaydha ku qalajiyey xad-dhaafka ah ee hoos loo dhigo waa in laga saaro. Xakamaynta si fudud ayaa loo jarjaraa mindi qalabaysan. Jeexitaanka soo baxa waa inuu ka buuxsamo qalabka caadiga ah ee darbiga.
Xaydha xad-dhaafka ah ee xayawaanka daaqada ah waa in laga saaraa si dhumucdeedka lakabka sare ugu yaraan 1 cm, lakabka noocan oo kale ah ayaa si qarsoodi ah u daganaanaya loomana tegi doono inta lagu jiro shaqada iyo hawlgalka dheeraadka ah.
Marxaladda ugu dambeysa, dhinaca geesaha ee xuubka ayaa la ilaaliyaa dhamaadka furka, iyo daaqadda oo dhan lafteeda ayaa lagu nadiifiyaa filimka difaaca.
Sida loo dhaqdo daaqadaha
Marka habka caadiga ah ee guriga loo isticmaalo, sida: Saabuun, soodhada, suufka, budada ilkaha, niqiijiga ayaa u muuqda inaysan awood u lahayn dagaalka lagula jiro kiimikooyinka khaaska ah ee soo galaya badbaadinta. Xulashada kiimikada casriga ee casriga ah waxay awood u yeelan doontaa inay la qabsato wax kasta oo wasaqoob ah oo ku saabsan dusha caagga ah. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad sax u sameyso dhibaatadaada kaaliyaha iibinta ee qaybta kiimikada guryaha, adoo adkeynaya inaad u baahan tahay qalab nadiifin caag ah.
Hawlgallada taxaddar leh iyo daryeelka joogtada ah ayaa ka hortagaya dhibaatooyinka la xidhiidha aargoynta sunta adag. Waxa ugu muhiimsan - ha isticmaalin waraaqaha birta iyo walxaha: waxay ka baxaan xagasha, ka dibna soo uruuray wasakh.
Ku rakibida daaqad aad la leedahay gacmahaaga ama adigoo adeegsanaya adeega koox dhisme oo gaar ah waa adiga. Dhab ahaan, habka rakibida ee xayawaanka daaqadda ma aha mid dhib badan, si kastaba ha ahaatee, waxay u baahan tahay helitaanka ama helitaanka qalabyada lagama maarmaanka ah, sarbeebyada (hadhaaga laga yaabo inaanay faa'iido lahayn) iyo xirfadaha. Haddii isku dayga koowaad ee lagu rakibo taarikada PVC-ga ah ee gacmahaaga ayaa ku guuldareysta, markaa wadarta khidmadda is-rakibidda waxay noqon kartaa wax ka badan mushaharka masterka.
Video: sida loo rakibo windowsill-do-it-yourself